Indlu ebukekayo entabeni - I-Airbnb
Indlu ebukekayo entabeni
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguSteve
Le ndlu ime phezu kwenduli encinci ethe cwaka kwintlambo yaseGosau. Le ndawo iyenza ibe yindawo ekhethekileyo neqaqambileyo yokubona iintaba zaseGosau kunye neendawo ezivulekileyo entlanjeni. Indawo entle yobusika neeholide zasehlotyeni
IHaus Am Rennerbühel ime phezu kweqonga elincinci elizolileyo kwintlambo iGosau-Hintertal.
Le ndawo iyenza ibe yindawo ekhethekileyo neqaqambileyo yokubona iintaba iGosaukamm kunye neendawo ezivulekileyo kuyo yonke intlambo iGosau kuquka neecawa zayo ezintathu ezahlukileyo.
IGosau sesinye seedolophana eziphambili ze-ski kummandla weDachstein West ski – eyona inkulu kwi-Upper Austria kunye neekhilomitha ezingaphezu kwe-140 ze-ski piste.
Ummandla weDachstein yindawo ye-UNESCO Yemvelo kunye Nenkcubeko Yehlabathi (iwebhusayithi efihliweyo).
Ukungena kule ndlu kunye neendawo zayo ezintle onokuzibona xa ukwisitepsi esingaphandle esikusa ecaleni kwento yokutshixa izinto.
Le ndlu imalunga ne-100 m sq. kwaye inomgangatho ophantsi, umgangatho wokuqala nowesibini.
Kukho igaraji ekhuselekileyo enokusetyenziswa ngoku njengendawo yokugcina izixhobo zokutyibiliza ekhephini ebusika kunye nendawo yokugcina izixhobo zemidlalo yamanzi ehlotyeni.
Kukho indawo yokupaka esimahla yendlu ecaleni kwegaraji, enokwamkela iimoto eziyi-2 ukuya kweziyi-3.
Igadi enomtsalane ngasemva endlwini inendawo yokuhlala egqunyiweyo kwaye iindwendwe zingasebenzisa iitafile zegadi yeplanga nezitulo ezigcinwe ngaphakathi.
Le ndlu ifudunyezwe zizinto zokufudumeza udonga ezisebenza ngombane, ezikumagumbi neendawo ezisetyenziswa ngumntu wonke.
Iipaneli zobushushu zisasaza ubushushu ngaphakathi endlini zize zenze indawo etofotofo ingakhange ibangele ingxolo okanye ijikeleze uthuli nokungcola. Indawo nganye inomlawuli wayo wedijithali ozimeleyo wokulawula ubushushu baloo meko.
Le ndlu iphinde izuze ngokuba ne-karchelofen entle enethayile ekwigumbi lokutyela nakwindawo yokuphumla.
Ikhitshi lale mihla likhulu kwaye livulekile ibe linomphezulu wetafile oqinileyo wokhuni kunye neengenelo kwiikhabhathi ezininzi kunye nendawo yokugcina izinto.
Ikhitshi linika iindwendwe zonke izixhobo zokupheka ezifunwayo, i-crockery, i- cutley kunye nezinto zokupheka ukuze zihlale kamnandi nosapho oluquka:
we-microwave Ifriji enkulu
I-induction zombane i-4 ring
hob Ioveni yombane
Isinki ephindwe kabini
Cafeteria Teapot Umatshini wale mihla wokuhlamba nowokomisa impahla usekhitshini kunye nebhodi yokuayinela kunye ne-dryer yeempahla nayo iyafumaneka ukuba isetyenziswe ziindwendwe.
Iindwendwe zinokuphola kwindawo etofotofo , etofotofo, yokuphumla, eneesofa ezimbini ezinkulu nemiqamelo emininzi.
Kukho i-TV entsha enonxibelelwano lwe-satellite kumajelo asimahla kunye ne-DVD kunye nebhokisi ye-apile ye-TV enokusetyenziselwa ukufikelela kwiifilimu ku-Netflix kunye ne-apile iTunes ukuba ubamba i-akhawunti yayo. Iincwadi ezintle onokukhetha kuzo, imidlalo kunye ne-DVD, zilungiselelwe ukusetyenziswa ziindwendwe.
Kukho indlu yangasese kunye negumbi lokuhlamba kumgangatho wokuqala kufutshane nepaseji enendawo eyongezelelekileyo yokuba iindwendwe zibeke iimpahla zangaphandle.
Kukho nendawo eyongezelelweyo yokugcina kunye neengubo ezijingayo kwiholo yokungena enethayile yeemarble kumgangatho osezantsi enendawo enkulu yokuxhoma iibhatyi kwaye ingasetyenziselwa ukugcinwa kweebhutsi kunye ne-ski ukuba kuyimfuneko.
Indawo yokuhlala etofotofo kakhulu enamagumbi okulala ayi-3 aqaqambileyo anebhedi enkulu eyi-1 ibhedi elala abantu ababini enye neebhedi ezimbini ezilala abantu ababini.
Amagumbi okulala amabini anesilingi ezinomtsalane neendawo ezintle. Kwiintaba. Igumbi lesithathu elineebhedi ezimbini liyakonwabela ukubona igadi ngakwintlambo i-Gosau. Kukho iibhedi ezimbini zeFolderway ezinokusetyenziswa kumagumbi okulala okanye kwindawo yokuphumla.
Kukho isitshixo esincinci esikwicango langaphambili onokulindela ukuba ufike emva kwexesha, ungashiywa isitshixo ngokucoca indlu.
Le ndlu ine-Wi-Fi kuyo yonke le ndawo ukuze ukwazi ukunxibelelana nabanye abantu xa ungekho.
Onke amagumbi kunye neendawo ezisetyenziswa ngumntu wonke zinealam yomsi kunye nezicima-mlilo kuyo yonke imigangatho kunye nenye indawo yokubaleka kwigumbi lokulala eliphezulu.
IHholostatt imalunga nemizuzu eyi-15 xa usuka
eGosau Idolophana yaseHongstatt yindawo entle ngeyona ndlela apho abantu baseTshayina benze ikopi yale lali yamatye yakudala nenendawo yokuphuhlisa izindlu kwidolophu yaseLuoyang eBoluo County, eTshayina.
IHholostatt yidolophu encinci kodwa eyona ndawo intle ngeyona ndlela. Ithathwa ngokuba yeyona ndawo indala ekuhlalwa kuyo eYurophu. Kuthatha ixesha elingaphezu kwesiqingatha seyure ukuhamba kule dolophu ukusuka kwelinye icala ukuya kwelinye
Iholostatt yindawo enembali ye-UNESCO kwaye yindawo ebalulekileyo yabakhenkethi base-Austria.
Le dolophu ineendawo ezintle kakhulu zokutya nokusela, iivenkile zokutyela ezimbini onokuziqaphela:
Seehotel Gruner Baum, Marktplatz 104, Hallstatt 4830
Gasthof Zauner, Marktplatz 51 (iwebhusayithi efihliweyo). I-Wolfgang imalunga nemizuzu eyi-35 xa uqhuba iGosau
I-St. Wolfgang yindawo ye-spa kunye nemidlalo yasemanzini kunye ne-resort ethandwayo yokutyibilika ekhephini ngexesha (iwebhusayithi efihliweyo). I-Wolfgang yaziwa ehlabathini lonke ngecawa yayo entle yenkulungwane ye-15 kwaye mhlawumbi yeyona hotele intle eAustria, iWhite Horse Inn, (i-Im Weissen Röss) eyenziwe yaduma nge-operaetta yegama elifanayo.
Ngexesha lasehlotyeni, iSchafbergbahn, indawo yokuxhoma uloliwe
eyavulwa ngo-1893, ibaleka ukusuka kwidolophu encinci yaseSt. Wolfgang ukuya kwintaba yeSchafberg
Le ndawo inembonakalo entle yokuphefumla kwiintaba namachibi eSalzkammergut kwaye ikwayindawo yehotele eyasekwa ngo-1862 apho ungahlala phandle uze utye okanye usele nje ngoxa ukwiwebhusayithi efihliweyo (iwebhusayithi efihliweyo). I-Wolfgang ineevenkile ezininzi zokutyela, iikhefi, iivenkile kunye neebhari kwizitrato zayo ezintle ezinamatye agangathiweyo.
IBAD Ischl ikumgama wemizuzu eyi-20 xa usuka
eGosau IBad Ischl yayiyi-spa yase-Austria apho ubukhazikhazi boMlawuli uFranz Joseph bushiye eyona nto iphambili, ibe iye yaba lelinye lamaziko aqaqambileyo ebomini befashoni eYurophu iminyaka eyi-70.
Iipaki zayo kunye nezakhiwo zikawonke-wonke ze-Biedermeier zidibana kwiintaba ezinamahlathi amaninzi. Namhlanje, "izinto ezishiyekileyo" ukususela ngo-19c ukuphila kwe-spa kusekho, njenge-Zauner erearoom okanye iSeenauer House, kunye neRococo façade kunye nee-triple gables.
IBad Ischl iseyenye yezona ndawo zefashoni kweli lizwe. Le dolophu isabonisa imbono ethile yobukhosi ekwakhiweni kwayo, ininzi yayo eshiywe emva kwemini yoBukhosi base-Austro-Hungary. Omnye unokuhamba-hamba kwi-resort aze onwabele amasiko amadala njengoko bekunjalo kwixesha elidlulileyo, kodwa ngoku alungiswe kakuhle waza walungiswa ngendlela ephucukileyo.
Idolophu ephithizelayo, eguquguqukayo, indawo ethandwayo yabakhenkethi, inika umdla wobomi obungathethekiyo kubantu abahlukahlukeneyo ukusuka kwezona ndawo zisebenzayo emzimbeni ukuya kwabo bafuna ukonwabela ubugcisa benkcubeko kunye nezinto zakudala. Ubuhle obungathethekiyo beendawo ezijikelezileyo, iintaba ezenziwe ngekhephu namachibi acwengileyo, zenza kubekho indawo entle ngeyona ndlela.
I-SALZBURG ikumgama wemizuzu eyi-55 xa usuka
eGosau I-Salzburg ikwazile ukugcina ilaphu elityebileyo lasedolophini, eyakhiwe ngelo xesha ukususela kwiMiddle Ages ukuya kwinkulungwane ye-19 xa yayiyindawo esesixekweni elawulwa yindumasi. Ubugcisa bayo be-Flamboyant Gothic batsale iingcali ezininzi kunye namagcisa ngaphambi kokuba esi sixeko saziwa ngakumbi ngomsebenzi wabayili bezakhiwo zaseItali uVincenzo Scamozzi kunye noSantini Solari, apho iziko laseSalzburg libangela imbonakalo yayo ye-Baroque. Le ntlanganiso yasemntla nomzantsi weYurophu mhlawumbi yavuselela ingqiqo yonyana odumileyo waseSalzburg, uWolfgang Amadeus Mozart, oye igama lakhe linxulumene nesixeko ukususela ngoko.
Akukho kutyelelo lugqityiweyo ngaphandle kokuhambahamba kwiigalari zobugcisa ezintle zesixeko, ingokuhlwa kwimidlalo yeqonga, ikonsathi okanye umdaniso. Sukucinga nokuzama ukwenza izilingo ezinamandla zenkcubeko ezikhoyo kwesi sixeko. Uza kuphulukana nento onokuyonwabela eyonwabisayo!
Nangona iSalzburg isenokubonakala incinci xa uqala ukuyibona, izinto zayo zenkcubeko zinkulu. Kuthiwa: "Imeko yaseSalzburg igcwele ubuhle, imidlalo yeqonga kunye nobugcisa."
Umculo, kunye ne-opera, uthotho lwekhonsathi, iminyhadala kunye nomculo, unxulunyaniswa kakhulu nemidlalo yeqonga, iincwadi, umdaniso, imiboniso kunye nemicimbi yasekuhlaleni. Isixeko sonke liqonga kwaye uza kufumanisa: ukuba uyayithanda imizobo nenkcubeko, uza kuyithanda iSalzburg.
Izinto ezibalaseleyo ziza kujongana nokukhetha okungapheliyo eSalzburg: iphondo laseSalzburg lineevenkile zokutyela ezintle kakhulu eAustria. Uninzi lwezi zakhiwo zihonjiswe kakuhle zikwisixeko saseSalzburg. I-Salzburg ikwayindawo ethandwayo xa kuthethwa ngokutya okuphilayo: phantse i-38 pesenti yeendawo zokulima ngamafama aphilayo. Neevenkile zokutyela ezilula zikunika ukutya okumnandi okuvela kummandla waseSalzburg.
Iigadi zebhiya ezinomtsalane, izindlu zekofu zesintu, iivenkile zokutyela ezintle, iibhari ezithandwayo kunye nezindlu zeendwendwe ezitofotofo ziza kukutsala ukuba ufumane iwayini nokutya eSalzburg. Iivenkile zokutyela ezityebileyo esixekweni zilungiselela ukutya okuluncuthu, abantu abaneentlanzi ezimuncis 'iintupha nabantu abangalaliyo ebusuku.
Ezinye zeendawo ezithandwayo zokutya phakathi kokutya ziivenkile ezithengisa ukutya okumnandi eSalzburg 's Old City, ezimi kwiGreen Market okanye kwenye yeemarike zamafama eveki eMirabell Square okanye ePapageno Square.
Ulindwe lixesha elikhethekileyo lokuthenga eSalzburg. Iivenkile ezahlukahlukeneyo zingafumaneka kwi-Old City – kwi-Getreidegasse, kwiJudengasse nakwiindlela zemveli - kuquka iivenkile ezihlala ixesha elide, amatsheyina ehlabathi kunye nee-boutique ezincinci. Ngokuqinisekileyo ihlawula ukujongwa kuyo yonke indawo kunye nezona zitrato zincinci. Isenokuba ifihla ubuncwane obumangalisayo.
I-Salzburg inezona ndawo zokuthenga zanamhlanje nezinomtsalane emhlabeni: iEuropark ephumelele iimbasa ineevenkile eziyi-130 zokuthenga okungapheliyo.
Iivenkile eSalzburg zidla ngokuvulwa ukususela ngoMvulo ukuya kutsho ngoLwesihlanu ukususela ngo-10:00 kusasa ukuya kutsho ngo-6: 00 ebusuku neMigqibelo ukususela ngo-10: 00 ekuseni ukuya kutsho ngo-5: 00 ebusuku Ezinye sele zivuliwe ngo-8: 00 ekuseni okanye zivalwe isidlo sasemini seyure eyi-1 okanye eziyi-2. Iivenkile ezimbalwa, njengeevenkile zesikhumbuzo, nazo zivuliwe ngeeCawa nangeeholide.
Iivenkile eziseYuropark zivuliwe ukususela ngoMvulo ukuya kutsho ngoLwesine ukususela ngo-9:00 ekuseni ukuya kutsho ngo-7: 30 ebusuku, ngoLwesihlanu ukususela ngo-9: 00 ekuseni ukuya kutsho ngo-9: 00 ebusuku, ngoMgqibelo ukususela ngo-9: 00 ekuseni ukuya kutsho ngo-6: 00 ebusuku
I-BERCHTESGADEN imalunga nemizuzu eyi-55 xa uhamba ngemoto ukusuka
eGosau Le dolophu ikwintlambo e (inombolo yefowuni efihliweyo) ukuphakama kumzantsi-mpuma weJamani Alps kwaye ingqongwe ziintaba eziphakamileyo. IBerchtesgaden kunye neBad Reichenhall zidume ngemigodi yabo yetyuwa.
Kwimbali yakutshanje, igama likaBerchtesgaden laziwa kakhulu ebantwini ngenxa yezizathu ezinzima ezingakumbi: umphathi weNazi waseJamani, uAdolf Hitler, wayeneholide yakhe yasehlotyeni kwindawo eyaziwa ngokuba yiBerghof eObersalzberg. Indlu eyakhelwe yona phezulu entabeni ngentla kweObersalzberg, kodwa wayityelela izihlandlo eziliqela kuphela. Yaziwa ngesiJamani njengeKehlsteinhaus, kwaye yabizwa ngokuba "yi-Eagles Nest" ngabantu baseMerika abahlala emva kwemfazwe. Zonke izakhiwo kunye neebunkers zaseBerghof zatshatyalaliswa ekupheleni kweMfazwe Yehlabathi II kwaye kule mihla iziko lamaxwebhu lingafumaneka kufutshane nendawo kwiObersalzberg. I-Kehlsteinhaus iyafumaneka ngebhasi esuka e-Obersalzberg, kwaye ngoku itshintshelwe kwivenkile yokutyela.
I-Karchelofen yethu sisitovu somthonyama esineethayile ezitsha iinkuni ngokufanelekileyo - nto leyo eyenza kubekho ubushushu obucocekileyo nohlala ixesha elide.
Ubushushu bugcinwa kubuninzi bezitena zodongwe, emva koko buvele kancinci egumbini iiyure eziyi-8 ukuya kweziyi-24 ezilandelayo.
Umlilo ngokwawo uyatshisa ngokukhawuleza, unezixhobo ezininzi. Xa sele kuncitshisiwe umlilo, ucango lweKarchelofen luvaliwe, ukuze iigesi zihambe ngokuthe ngcembe kwinkqubo ende kakhulu. Ubushushu obuninzi bezitena. Le nto iphinde ifudumale iKarchelofen egqamisa ixesha elide egumbini.
Imiyalelo epheleleyo yokusetyenziswa kweKarchelofen iza kunikwa ngumntu ogcina indlu kwiwebhusayithi yakho (efihliweyo) UGilgen umalunga nemizuzu eyi-40 xa uhamba ngemoto ukusuka eGosau
(I-Sankt Gilgen) yidolophana entle kwiinxweme zeWolfgangsee, kwaye yayiyindawo eyayinezinto ezininzi ezityebileyo zaseViennese ehlotyeni (iwebhusayithi efihliweyo). IGilgen yindawo eyaziwayo yokuhamba, edume ngobuhle bayo, indawo yedolophu enembali kunye nokufikelela kwiLake Wolfgangsee. Ithandwa kakhulu ngabakhenkethi bamazwe ngamazwe, abaza eSt. Gilgen ukuba kunokwenzeka ngohambo losuku ngexesha lasehlotyeni nasebusika, xa kukho iMarike yeKrisimesi edumileyo kule dolophu
Izikhephe ezisuka eSt. Gilgen zijikeleze iWolfgangsee zibonisa ubuhle beentaba ezijikelezileyo kunye nokudibanisa abantu baseSt. Gilgen, Strobl kunye neSt. Wolfgang.
Uhambo phakathi kweSt. Wolfgang kunye neSt. Gilgen luthandwa kakhulu njengoko lubonisa ezona ndawo zinomtsalane zaseSalzkammergut. Enye into ebalaseleyo kule ndawo yimoto ehamba phambili kwiZwölferhorn.